Maqaalo – Page 2 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Faallo:Maarayn la’aanta Siyaasadda Qaranka waxay sii fogeynaysaa baadigoobka Midnimadda.
April 29, 2016	Leave a comment 31 Views
Burburkii Dowladdii Kacaanka waxaa laga dhaxlay burbur saamayn ku yeeshay Qaranka Somalia, waxaana wada hoobtay Tiirarkii Dowladnimadda, Midnimadda, Nabadda, Horumarka iyo Danaha Qaranka. Waxaa soo if-baxay Siyaasad-kooxeed iyo mid Beeleed, wuxuuna Qabiil kasta isku arkay sidii Aarka Somalia ee looga dambeeyo Talada iyo Masiirka Qaranka Somalia. Siyaasi kasta oo Tala-xume ah waxa uu Qabiilkiisa tusiyey Humaag Dowladeed iyo in Beelaha ...
April 7, 2016	Leave a comment 80 Views
Madaxweynaha Maamul-gobaleedka Puntland, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa isbuucan muujiyey Debecsanaan Siyaasadeed, kadib, markii uu la kulmay Cadaadis kaga yimid Diplomaasiyiinta Caalamka iyo Dowladda Federalka, si uu u aqbalo in Nidaamka Doorashadda lagu saleeyo Awood-qeybiga 4.5 ee Somalia marjaca siyaasadeed u noqday 7-dii sanno ee ugu dambeysay. Madaxweyne Gaas waxa uu Galaangal-siyaasadeed u galay inuu ku dheganaado Aragtida uu ku ...